Zvinoita sekunge kuseka: skrini yekuchenesa machira eMacBook Pro ye25 euros | Ndinobva mac
Zvinoita kunge kuseka: skrini yekuchenesa machira eMacBook Pro yemakumi maviri nemashanu euros
Chiitiko cheApple nemusi weMuvhuro chaive chipfupi asi chakanyanya. Imwe yenyaya dzakanakisa dzataifanira kuona pamusangano iwoyo yaive itsva-yakamirirwa kwenguva refu 14-inch uye 16-inch MacBook Pro mamodheru. Apple haina kuodza moyo uye yakapa chaiyo michina yesimba uye mashandiro nekutenda kune nyowani M1 Pro uye M1 Max machipisi. Chidzitiro cheaya mamodheru matsva chinopa zvakawanda zvekutaura nezvazvo, uye kugara uchizvigadzirira uye zvakachena, unogona kutenga jira rekuchenesa pamutengo wakadzikama kwazvo we25 euros. Zvinoita kunge kuseka, asi hazvisi.
Apple inokwanisa kuita zvakanaka nezvakaipa panguva imwechete panguva. Pachiitiko chanezuro, iyo nyowani MacBook Pro uye AirPods zvakafumurwa. Isu tese tinoziva kuti mitengo yemidziyo yeApple yakakwira uye zvinoita sekunge munhu anojairira uye zvinoita sekunge zvakajairika kuti iyo 14-inch MacBook Pro inotanga pa2.249 euros uye mazana mashanu kana iwe uchida iyo 500-inch. Asi ivo ngavakutengesere jira rekuchenesa 25 euros, icho chinhu chinenge chinogumbura.
Kambani yeAmerica inowanzopa zano pakuchenesa nano-dhizaini girazi sarudzo paPro Display XDR uye 27-inch iMac, asi jira idzva rekuchenesa rinoita kunge rakakodzera kushandiswa kunyangwe pazviratidzwa izvi. Zvakare zvezviyero zveiyo nyowani MacBook Pro. Iine mvura retina XDR yekuratidzira tekinoroji
Yakagadzirwa nezvinhu zvakapfava, zvisingaomeseri, jira rekukorobha rinosuka chero Apple screen, kusanganisira nanotexture girazi, zvakachengeteka uye zvinobudirira.
Kuti zvingadai zvakadhurira kambani kuwedzera jira iri mubhokisi. Chaizvoizvo, pane zvinhu zvandisinganzwisise uye zvandisingazombonzwisise. Mucheka wemakumi maviri nemashanu euros. Chamois yekuchenesa magirazi, ine chokwadi chinoita basa rimwe chete uye kana ukapinda kune nyanzvi yemaziso ukaikumbira, ivo vanokupa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Zvinoita kunge kuseka: skrini yekuchenesa machira eMacBook Pro yemakumi maviri nemashanu euros
Izvi hazvigone kuve chero chinhu kunze kwekuyedza kushambadzira bvunzo.
Sezvo mutambo unoenda mushe, chero zuva reizvi ivo vachatanga kubhadharisa kunyangwe iwo mapepa emaapuro ayo anowanzo kuuya mune zvigadzirwa zvemumwe mutengo.
Uye chinhu chakanaka chichava chekuti kunyangwe vamwe vachazoda kuvabhadhara.
Ehezve, izvi neMabasa HAZVIITIKE ‍♂️
Podcast 13 × 08: Nyowani MacBook Pro, HomePod uye Airpods
M1 Max processor GPU inodarika PlayStation 5